Ethiopian Muslims continue protests, as new PM continues the legacy of interference - Ayyaantuu News
Ethiopian Muslims continue protests, as new PM continues the legacy of interference By Mohammed Osman | October 20, 2012
1 comment - What do you think? Posted by admin - 20/10/2012 at 1:58 am Categories:
One Response to “Ethiopian Muslims continue protests, as new PM continues the legacy of interference”
Kumsaa says:	20/10/2012 at 12:12 pm	Jawar, nageenyi haa dursu! Waan ati dubbatuufi waan namoonni walga’an dubbatan dhaggeeffachaan yaada kiyya kana sii barreesse.
Akkuma beekamu, rakkinni muslima Toophiyaa rakkina amantii otoo hin taane, rakkina ilmaan Oromooti. Dhugaa dubbachuuf yoo ta’e, akkuma beekamu, akkuma atis dubbatte, anis ija kiyyaan argee, lakkoofsi ilmaan Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiru hammana jedhamee hin tilmaamamu. Tigroonni tuffii amantii isilaamaa irraa qabu otoo hin taane tuffii ilmaan Oromoorraa qabu. Lakkoofsi ilmaan Oromoo MILIYOONA 45-50 yoo tawu, isaan keessaa miliyoonni 30-35 mislima. UUMMANNI KUN TOKKUMMAAN ka’ee diina ofirraa faccisuu dhiiseti taa’ee wal ilaala. Kun dadhabbii guddaadha. Rakkoon kun rakkoo ilmaan Oromoo hundaa waan tayeefuu, rakkoo muslimaa qofa ta’ee dubbachuu hin barbaachisu.
Karaa biraatin immoo rakkoon jiru rakkoo hawaasa Oromoo biyya alaa jiru. Hawaasni biyya biraa rakkoo biyya isaatti dhalate hiikuf biyyoota lixaatti yeroo hundaa hiriira bayeeti ibsata. Fakkeenyaf yeroo Mallas Burtukaan Miidhaksaa hidheeyyu sana Amaaronni biyya addunyaa kanarraa tokkummaan ka’aniiti hiriira ba’aniiti hiiksifatani.
Ilmaan Oromoo hennaa akka oolotaati qabamanii mana hidhaatti dararaman, qabeenya isaanii saaman, amantii amanan akka hin amanne dhoowwaman maalif biyya tokkotti illee hiriira bayanii rakkina uummataa biyyoota murtee dabarsanitti hin ibissine?
Shoorri ABO maalinni?
Oromoonni Kirsitaana ta’an maalif muslimota bukkee hin dhaabanne?
Musliimonni maalif biyyoota Arabaatti, keessayyuu Makkaa (Saudi Arabiyaatti) hiriira hin baane?
Akka natti fakkaatu yoo taye, ‘uummanni Oromoo muslaama, kirsitaana, Waaqeffataa jedhamee, keessayyuu yeroo kana addadda qoodamuun irra hin jiru.
Tokkummaan umna akka taye waan beekamuufuu, miyoonni 50 miliyoona 6-n hin dararamu.